Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A July 2010 (3)
Q and A July 2010 (3)
အိမ်ထောင်ကျတာ ၃ နှစ်ပြည့်တော့မယ်၊ ကလေးမရသေးပါ။
Infertility ကလေးမရနိုင်ခြင်း ကို ဖတ်ပါခင်ဗျား။
20 Jul 10, 00:08
ကျမကို ဆရာရဲ့ personal email လေးပေးပါလားရှင် ကျမ ဒီနေ့မှ စိတ်ညစ်လို့ ရောဂါတခုရလာလို့ပါ။
21 Jul 10, 00:24
သမီးခြေမက ဖိနပ်အမာ စီးမိလို့ ခု သွေးခြေဥနေတာ ခြေသည်းအောက်မှာ ရုပ်ဆိုးလို့ပါ။ ဘယ်လို ကုသရမလဲရှင်။ ခြေသည်းအောက်အသားမှာ အကွက်လိုက်ကြီး မဲနေတာပါ။
အဲလိုဖြစ်တာ ပျောက်ဘို့ သိပ်မကြာပါ။ အရေပြားအောက်မှာ သွေးယိုထွက်နေတာမို့ အပေါ်ကမြင်ရတာ ပြာညိုညို ဖြစ်နေမယ်။ အဲဒီသွေးတွေက ပျက်စီးသွားတာရော ဘေးက တစ်ရှူးတွေထဲ စိမ့်ဝင်သွားတာရော လုပ်နေလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အားလုံး ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ သွေးထွက်တာ အနည်း-အများ၊ အရေပြားအောက်မှာ ဘယ်လောက် နက်တယ် ဆိုတာအပေါ် မူတည်ပြီး အနှေး-အမြန် ကွာတယ်။ ဘာမှမလုပ်လဲ ပျောက်တာပါ။ သတိထားဘို့ကတော့ ပိုးမဝင်စေဘို့ဘဲ။ လိုအပ်ရင် ပတ္တီးစည်းထားပါ။ ပိုးသေဆေး တခုခုလိမ်းပါ။ ဥပမာ Cipladine, Betadine, Burnol စတာတွေ။ ဗီတာမင် စီ သောက်ရင် မြန်မြန် ပျောက်တယ်လို့ ယုံကြတယ်။
21 Jul 10, 07:41
ဖတ်လို့လဲ မရဘူးကောဗျ။ လင့်ခ် တွေက Page not found တွေပဲဗျ။
ဆောရီး။ စာမျက်နှာ၏ အောက်ဆုံးသို့ End key ကို နှိပ်ပြီး သွားပါ။ အကျယ်ဆုံး Gadget တွင် ပေါ်နေသော မာတိကာထဲမှ ဖတ်လိုသည့် ခေါင်းစဉ်အား နှိပ်လိုက်ပါ။
21 Jul 10, 13:35
ကျမ ခါးအောင်ပိုင်း ဝမ်းဗိုက် နဲ့ ပေါင်၊ ခြေသလုံး၊ ခြေမျက်စေ့အထိ အရမ်းကို ကိုက်ခဲနေပပါတယ် ဆရာ အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လဲ လို့ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။
ခါးအောင်ပိုင်း၊ ဝမ်းဗိုက် နဲ့ ပေါင်ခြေသလုံး ခြေမျက်စေ့ အထိ အရမ်းကို ကိုက်ခဲနေတာက နေရာ ၃ မျိုး ဖြစ်စေတာ မတူတတ်ပါ။ ခါးဆိုရင် အလွယ်ပြောရရင် Ibuprofen လို အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး။ ခြေသလုံးနာတလဲ ရစေနိုင်တယ်။ ကြွက်တက်တာပါ ရှိသေးရင် Calcium သောက်ရအုံးမယ်။ ဗိုက်နာတာကို ရမ်းပြောရတာ ခက်တယ်။ သာမန်ဖြစ်ရင် Buscopan, Diclofenic သောက်နိုင်တယ်။ Antacid နဲ့ရောသောက်ပါ။
21 Jul 10, 20:05
I got back pain for more than 1 year and I don't have any physical injury. Dr. from Singapore said to take X-ray for Lumbosacral posture and for kidney sites. So let me know your suggestion for me. Thank.
Low Back Pain ခါးကောင်းမောင်းသန်ကြစေ ဆိုတာဖတ်ပါ။ ရှာရတာ မလွယ်ရင် တိုက်ရိုက် အီးမေးလ် လိပ်စာ ပေးပါ။ ပို့ပေးပါမယ်။
31 Jul 10, 18:19
တနေ့ ကျနော် အ်ိပ်နေတုန်းကျတော့ လိင်တံအပေါ် အရေပြားကို ပိုးကောင်ကိုက်သလို ခံစားရပြီး၊ အရမ်းယားလို့ ခဏခဏ ပွတ်ရာကနေ အရေပြား ပွန်းသွားပါတယ်။ အခု အနာလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြတော့ လိမ်းဆေးပေးတာ ၂ မျိုးရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မသက်သာသေးဘူးဆရာ.။ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လိုဆေး ပြောင်းသုံးသင့်ပါလဲ။ အဲဒီ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ ဆေးလိမ်းတာတော့ ၄ ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လို့ ပြောတယ်ဆရာ။ အန္တရာယ် မရှိဘူးလို့တော့ ပြောတာဘဲ။ သူ့ဆေးနံမယ် ပထမတခုက Asver 20mg Tipep နဲ့ ဒုတိယတခုက Gasc 40 mg Simethic ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ယားပြီး ပွတ်ရာကနေ ပွန်းတာအတွက် ဖြစ်တဲ့နေရာက နူးညံ့တဲ့နေရာမို့ ဆေးကို သတိထား သုံးရပါမယ်။ ပြောပြတဲ့ ဆေးနာမည်တွေကိုတော့ မသိပါ။ ရှာလို့လဲ မရပါ။ ကိစ္စမရှိပါ။ ယားတဲ့အတွက် ထုံဆေး ဒါမှမဟုတ် (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ပါတဲ့ဆေး လိမ်းရပါမယ်။ စားဆေးဆိုလဲ Antihistamine ပါတာ သောက်ရမှာပါ။ Citrizine, Avil, Burmeton လိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဗက်တီးရီးယား ဝင်လာလို့ ရင်းသလိုဖြစ်ရင် Antibiotic (အင်တီ-ဘိုင်ရောတစ်) တခုခု သောက်ရအုံးမယ်။ Ampicillin, Cipro, Doxycycline စတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နာတယ်ဆိုရင် Pain killer တခုခုသောက်ရမယ်။ Ibuprofen, Paracetamol တခုခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်နေတာပါ လျှော့စေတယ်။
ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင် ခြင်၊ ပုရွက်ဆိပ်၊ ကိုက်တဲ့အခါ လုပ်သလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Calamine lotion, Caladryl lotion, Mezincal လို နေလောင်လို့ လိမ်းရတဲ့ဆေးလည်း အသုံးကျနိုင်ပါတယ်။